Gasoline futha Vaz-2110. Izinkinga Key futhi Solutions yabo
Uma injini yemoto Vaz-2110 kubhekwa inhliziyo yayo, uphethiloli futha Vaz-2110 kungenziwa ngokuthi igazi lakhe Umthambo. Ngezinye ukungasebenzi uphethiloli uphethiloli futha kungenziwa enikeziwe imali ezincane kuno kuyadingeka futhi uma renunciation ephelele imoto nje ngeke zisebenze.
Esikhathini iphutha uphethiloli supply
Uma fuel futha Vaz-2110 kwenqatshiwe ngokuphelele, the supply fuel ngeke kwenziwe, futhi ngenxa yalokho, injini yemoto ngeke ukuqala. Indlela elula ukuhlola ukusebenza iphrinta - ufaka ukhiye e le ukuthungela futhi uligucula endaweni yokuqala. Ngemva zokukhwabanisa enjalo kufanele avele umsindo elihambisana futha nophethiloli. Uma umsindo kuyinto, imbangela imoto ukuwohloka, kufanele abheke kwenye indawo. Ungahlola wonke amapayipi amanzi nophethiloli. Uma umsindo aliveli ezifanele, isizathu empeleni itholakala futha nophethiloli. Lokhu kungaba idivayisi okukhipha amandla ukwehluleka noma zokugwema ukuphuka.
Isikhathi esining impela operation engazinzile yenjini, ukulahlekelwa amandla, ngenxa yalokho, flameout abanikazi imoto ngifuna imbangela emhlanganweni mpintsha, IAC futhi TPS. Kodwa ngokuvamile kuba ibangelwa yokuziphatha okunjalo amandla iyunithi kungaba ukungcola komkhuba e uhlelo fuel, okuyinto ayikuvumeli uphethiloli ukungena ku lemali edingekayo. Kulokhu, kufanele uhlole okuhlungayo esihle futhi indawo. Eyokuqala itholakala eduze uphethiloli. Wawuqinisa ukuze amapayipi amanzi esukela uphethiloli kanye wesitimela nophethiloli. Kuyadingeka ukuba uyasikrufulula kanye nokuhlola. Uma lemifanekiso has a ukungcola, kumele zithathelwe indawo ezinye, bese uhlole ukusebenza imoto. Uma lokhu kungasebenzi, kubalulekile ukuhlanza noma bayawushintsha strainer isihlungi anezikhala. Kulokhu-ke kuyadingeka ukususa fuel futha Vaz-2110. Kungasetshenziswa ukuhlanza zokuhlanza zezimoto, ezifana carburetor wezindlu bese nishaye ke compressor.
Indlela ukususa uphethiloli futha Vaz-2110
Into yokuqala okudingeka ukuba uyeke lingakunika amandla ngogesi imoto inhlansi okungahleliwe akuzange kumenze umlilo. Ukuze wenze lokhu, Songa wire kuya negative ukuphela kwe-ibhethri.
Isinyathelo esilandelayo phinda esihlalweni ezingemuva, esemgwaqweni ngaphansi dweba ukuze uphethiloli.
Ngokulandelayo, ukususa ngezikulufo ezine ukuthi uvikelekile ikhava plastic noma insimbi mgodi ngalesosikhathi enyula it.
Manje ingaphandle futha iyabonakala. Ungakwazi ukuvimbela ipulaki ebhodini kagesi futhi ukhiphe fuel hoses.
Ukuze uthole uphethiloli futha Vaz-2110 kusuka uphethiloli, uyasikrufulula nuts obandayo.
Phakathi yokutakula kungenzeka ewa beaker plastic. Kodwa akunjalo scary, ngoba uyibuyisele endaweni ngempela kalula.
Ukufaka iyunithi oda reverse.
Ngesikhathi u-petrol futha Vaz-2110 intengo kuncike umakhi. It zokhahlamba kusuka 1.5 kuya kwezingu-2.5. Ngokuqondene anezikhala of futha uphethiloli, izindleko salo ruble 50-60 kuphela. Lokhu cishe esilinganayo imali ukuthi uzobe esichithwa wezindlu. Zonke umsebenzi kungenziwa ngokuzimela. Uma isibambo imoto ukugeza, ukususwa kanye ukufakwa futha fuel izobiza ruble angu-800. Uma ufuna ukuhlanza anezikhala noma esikhundleni sakhe, ukuthi ezinye iziteshi inkonzo kungaba ukungezwa intengo ruble 100-150. Yomiselela somnikazi esihle imoto izobiza ruble 250.
Siyini "ukuhweba-e"? Izinzuzo izici kazwelonke
UAZ-3909 - Zonke amasondo gruzotaksi
Anombala ngokuzenzakalela ingilazi - Uhlolojikelele Izinzuzo
Inzwa camshaft idling inzwa. Imiyalelo abahamba ngezimoto
Ukulungisa imoto, yokulungisa
Uhlu enuzi izitshalo amandla Russian. Bangaki enuzi izitshalo amandla eRussia
Isisindo esivamile a wrestling sumo. isisindo sumo wrestling
Izimbobo nekhompyutha izixhumi. Izinhlobo ikhompyutha izixhumi. ikhompyutha isixhumi pinout
Lo mbukiso "Titanic" ( "Afimall"): izithombe embukisweni, ukubuyekezwa
Biography Ruslan Tatianina: amaqiniso athakazelisayo. Incwadi ethi "zezinwele kangcono zonke izikhathi kusukela Ruslan Tatianina"
Imithetho iwubuphukuphuku eziningi zomhlaba
Dyuspo (izicubu): Incazelo kanye nezici
Indlela yokukhetha umnyango wensimbi ngendlela efanele
Dzhozefa Kosinski ifilimu "Ekuqothulweni". Abalingisi
France Inkolo. Ukuxhumana Amasiko inkolo eFrance
Disemba 4 ukuthi iholide lugujwa eRussia?
Isipho sokuqala kumfana wakho othandekayo. Kusuka enhliziyweni ngothando ...